September | 2009 | Moep1's Blog
(YANGON, 25 Sept, 2009)
Minister for Electric Power No.1 Col Zaw Min received President Mr Wujing of China Datang Overseas Investment Co., Ltd (CDOI) from the People’s Republic of China and party at the ministry in Nay Pyi Taw this morning.
Also present at the call were were Deputy Minister U Myo Myint and depart-mental heads.
Comments Off on EP No. 1 Minister receives CDOI President of PRC	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
EP No.1 Minister receives Vice-President of Huaneng Lancang River Hydropower Co
(NAY PYI TAW, 17 Sept, 2009)
Minister for Electric Power No. 1 Col Zaw Min received Vice-President Mr. Huang Guangming of Huaneng Lancang River Hydropower Co., Ltd from the People’s Republic of China and party at the ministry here on 15 September.
Also present at the call were Deputy Minister U Myo Myint, the directors-general and managing directors of the departments and enterprises under the ministry and officials.
Comments Off on EP No.1 Minister receives Vice-President of Huaneng Lancang River Hydropower Co	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
Comments Off on ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့်အဖွဲ့လာရောက်တွေဆုံ	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
(NAY PYI TAW, 10 Sept,2009)
Minister for Electric Power No.1 Col Zaw Min received General Manager Mr Li Guanghua of CPI Yunnan International Power Investment Co Ltd and party of PRC at the ministry here yesterday evening.
Also present at the call were Deputy Minister U Myo Myint, departmental heads, officials of the ministry, Deputy General Manager Mr Xu Shubio and personnel of CPI Yunnan International Power Investment Co Ltd.
Comments Off on Minister meets Chinese guests	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
(နေပြည်တော် စက်တင်ဘာ ၉၊၂၀၀၉)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ State Development &InvestmentCorporation (SDIC) မှ Vice President Mr. ShiHongxing နှင့် အဖွဲ့သည် ယမန်နေ့ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာ၌ ၀န်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယ၀န်ကြီးဦးမျိုးမြင့်၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ State Development & Investment Corporation (SDIC) မှ Director Mr. Li Bing နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းအား တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံမှ ဧည့်သည်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ	| အထွေထွေ (General News)	| Permalink
You are currently browsing the Moep1's Blog blog archives for September, 2009.